Filtrer les éléments par date : samedi, 01 février 2020
samedi, 01 février 2020 20:53
Coronavirus: Natsahatra vonjimaika ny fanomezana "permis de travail" an'ireo Sinoa
Misy 200 isan-taona eo ireo Sinoa mangataka hiasa eto Madagasikara, toy ny varotra. Noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus any Chine dia nanapa-kevitra ny gouvernemanta Malagasy fa hampihatona vonjimaika ny fanomezan-dalana hiasa "permis de travail" an'ireo Sinoa mangataka hiasa eto, mandram-pisy fanapahan-kevitra vaovao.
samedi, 01 février 2020 20:03
Anjanahary: Haintrano namoizana aina
Nitrangana haintrano teo Anjanahary-Antananarivo androany tolakandro. Trano enina tafo no kila, namela traboina telopolo mahery. Nisy olona iray namoy ny ainy nikasoka tamin'ny tariby nitondra herinaratra.
samedi, 01 février 2020 19:45
Fitsaram-bahoaka: Iray voatifitra, iray tapaka sofina, telo naratra
Rehefa tsy maty tamin'ny tora-bato ilay dahalo dia notifirin’ny Fokonolona, ny namany iray kosa noboriana ny sofina ka natao firavaka. Nandrava ka namira antsy mpivarotra fahana finday sy sigara tao Antsahabe izy roalahy ireo, ny Alakamisy teo koa raikitra ny fanarahan-dia nataon'ny Fokonolona.
Tratran’ny Fokonolona ireo olon-dratsy nony tao Belafary Kaominina Bevontro Sambava, ka raikitra ny fifanjevoana. Mbola nahavita nandratra olona roa tamin’ny Fokonolona ny dahalo iray, na efa voatifitra aza. Namoy ny ainy ilay dahalo taorian’izay. Nahitana vola telo tapitrisa Ariary tany aminy. Nalevin'ny Fokonolona tao Antsahabe omaly 31 janoary ny faty mandrapahatongavan'izay mety ho fianakaviany avy any Manakara.
Tonga nizaha ny zava-misy tao an-toerana ny Zandary sady nanokatra fanadihadiana, no nanentana ny Fokonolona mba tsy hanao fitsaram-bahoaka satria voararan’ny lalàna, fa hanolotra ny olon-dratsy amin’ny mpitandro ny filaminana.
samedi, 01 février 2020 19:43
Ziona Chana: 39 ny vadiny, 94 ny zanany ary 33 ny zafikeliny
Fianakaviana maro anaka ny an’i Chana. Lehilahy teratany indianina, mipetraka any Baktwang ao amin’ny fanjakan’i Mizoram. 39 ny vadiny, 94 ny zanany ary 33 ny zafikeliny, ary mbola manam-paniriana ny hampitombo sy hanitatra ny fianakaviany izy, haka vady sy hiteraka na efa 75 taona aza.
Miara-mipetraka amina trano lehibe iray misy rihana efatra sy efitrano 100 izy rehetra. Iray efitra, saingy ny zandriolona amin’ireo vadiny matory eo akaik’i Ziona Chana, any amin’ny sisiny lavidavitra kosa ny zokiolona indrindra amin’ity 39 vavy.
Mahalany vary 100kg, ovy 60kg ary akoho 30 isa eo, in-dray mihinana ity fianakaviana ity rehefa hariva.
samedi, 01 février 2020 15:25
Novotel Convention&Spa: Trano fandraisam-bahiny kintana 5 manaraka ny fenitra iraisam-pirenena
Notokanana omaly ny trano fandraisam-bahiny vaovao, sokajy kintana 5, Novotel Convention&Spa etsy Alarobia-Antananarivo.
Vokatry ny fiaraha-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana dia voalohany izao no nahazo trano fandraisam-bahiny kintana 5 i Madagasikara. Hiantraika mivantana amin’ny fizahantany sy ny toe-karena avy hatrany izany satria hampitombo ireo mpizaha tany izay mitaky kalitao avo lenta rehefa hitsidika ny nosintsika.
samedi, 01 février 2020 14:35
La Gastronomie Pizza: Manofana ny mpiasany hiatrika ny fifaninanana
Hentitra amin’ny fanajana ny fitsipika sy ny fenitra amin’ny fanaovan-tsakafo ny La Gastronomie Pizza. Miezaka manatsara ny tolotra sy ny fahaizamanaon’ny mpiasa ao aminy ihany koa ny orinasa, ka manome fiofanana ny mpiasa hanarahana ny fenitra sy hiatrehana ny fifaninanana.
Mifandimby mandalo fiofanana ny sokajin’asa misy, ka farany teo dia ireo « Gérant » no nofanina tamin’ny lafiny maro hifanaraka amin’ny toetr’andro ny fahaizan’ izy ireo. Nanafatra « consultant » maromaro sy manampahaizana sy be traikefa avy amin’ny Ministera ny La Gastronomie Pizza tamin’ny fampiofanana.
samedi, 01 février 2020 10:37
Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa: Nanome toromarika ny mpampianatra mba hanao ny asany araka ny tokony izy
Amperin’asa Rtoa Andriamanana Josoa Iarintsambatra Rijasoa, Minisitra vaovao misahana ny Fanabeazam-pirenena, sy ny Fampianarana ara-Teknika sy Arak'asa, taorian’ny fifamindram-pitantanana teo aminy sy Volahaingo Marie Thérèse, Minisitra nodimbiasiny toerana.
Fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly amin’ny antanan-tohatra rehetra manomboka eo amin’ny Minisitera Foibe ka hatreny amin’ny sekoly, no isan’ny nambaran’ny minisitra vaovao raha nandray fitenenana taorian’ny nandraisany fahefana.
Fanamby apetrany hanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana sy ny fampiofanana ara-teknika. Nanome toromarika ny mpampianatra ny tenany mba hanao ny asany araka ny tokony ho izy satria ny mpampianatra no miantoka ny fampiroboroboana ny fanabeazana.
Nilaza ny Minisitra fa tsy mitanila, tsy manao kitranoantrano ary misokatra ho an’ny rehetra ny varavarany.
samedi, 01 février 2020 10:12
Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana: Mandray ny fitantanana ny Ministera i Zasy Michael Angelo
Tontosa io marainan’ny sabotsy 01 febroary io, tetsy Anosy, ny famindram-pitantanana amin’i Zasy Michael Angelo ny Ministera lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana eo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy.
Nisy ny fifanaovan-tsonia sy fifanakalozana antontan-taratasy mikasika izany niharany tamin’ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy Hajo Andrianainarivelo.
Mahanoro: Tovolahy mamon-drongony nanakorontana, maty niharan'ny fitsaram-bahoaka
Nanakorontana toeram-pivarotana iray ilay tovolahy, tsy ampy taona, rehefa nentin’ny zavamahadomelina nofohiny.
Niantso vonjy tamin'ny manodidina ny tompon'ny tsena. Tezitra ny olona nahita ny fanimban-javatra nataon’ilay tovolahy tao amin’ilay toeram-pivarotana. Nosamborin’ny olona ary niharan’ny daroka ilay tovolahy ka naratra mafy, niafara tamin’ny fahafatesany.
Tonga nijery ny zava-misy ny Zandary rehefa nahazo fampandrenesana ary nanokatra fanadihadiana avy hatrany.
samedi, 01 février 2020 10:02
Mahabo: Nidoboka am-ponja ny « receveur » ny Paositra
Nametraka fitoriana ny Paositra Malagasy rehefa niahiahy amin’ny fahaverezam-bola 40 tapitrisa Ariary tao amin’ny Paositra Mahabo, faritra Menabe ny alatsinainy teo.
Misy mpivarotra manodidina ny Paositra tsy naheno antsoantso vonjeo. Roa mianadahy ny mpiasan’ny Paositra Mahabo. Ireo no nahiahiana, ka ireo nanaovan’ny Polisy famotorana niaraka tamin’ny vadin’ilay « receveur » ny Paositra. Natolotra ny Fitsarana tao Morondava izy telo ireo ary notazomina am-ponja vonjimaika.